अन्जा स्काप पहिले नै एक PsyOp साबित भयो? हेर्नुहोस् किन (भिडियो) यहाँ: मार्टिन भिजल्याण्ड
के अजा Schaap मामला छ पहिले नै एक PsyOp (मनोवैज्ञानिक अभियान) को रूपमा प्रमाणित गरियो? मा मेरो अघिल्लो लेख मैले पहिले नै संकेत गरे कि अन्जा स्काप मामला शायद 'शर्लक' नामक सर्च एप को परिचय को आसपास घूमती छ। ठीक छ, हामी के देख्छौं जब हामी अन्जा स्काप को फेसबुक पेज हेर्छौ? त्यसपछि हामी देख्छौं कि उनीसँग उनको ठेगाना अन्तर्गत निम्न ठेगाना छ: 221B बेकर स्ट्रीट। मानौं कि यो कडा मजाक होइन, शर्लक एपसँगको लिंक तुरुन्तै यहाँ खाली हुनेछ।
वास्तव मा लन्दन को 221B बेकर स्ट्रीट मा कौन सा थिए? दायाँ, शर्लक होम्सहरू। यसैले यो धेरै ठिक छ कि यसको सम्पूर्ण सोशल नेटवर्क (वा यसको भागहरू) सहित अन्जा स्काप प्रोफाईल गेटफेकको माध्यमबाट एकसाथ जोडिएको छ। Inoffizieller Mitarbeiter को नेटवर्क पनि एक फेसबुक नेटवर्क मा विश्वसनीयता दिन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि अवस्थामा, यो स्पष्ट छ कि मान्छे सजिलै संग Sherlock एप संग लिङ्क देखाउन। एउटा दृष्य लिनुहोस् र पछि पढ्नुहोस् यो लेख राम्रो गर्न कसरी गहिरो बनाइन्छ र प्रयोग गरिन्छ।
33 वर्षको उमेर, यो पनि एक संकेत हो कि हामी Freemason PsyOp संग काम गर्दै छन्। यस गुप्त समाज भित्रको संख्या उच्चतम स्तरको लागि 33 छ।
इजाजको फेसबुक समयरेखामा प्रतिक्रियाहरूको संख्या अत्यन्तै उत्सुक देखिन्छ र यसको अतिरिक्त, ती जवाफहरू मुख्यतः गहिरो प्रोफाइलबाट आउँछन्। अंजाको सम्पूर्ण प्रोफाइल आफैलाई गहिरो बनाइन्छ। यसको अतिरिक्त, उनको समयरेखा वन्डरल्याण्ड मा एलिस को संदर्भित गर्दछ, जो एक खरगोश वाला छेद (स्ट्राट पटरिहरु) को mazes को संदर्भ हो। यो पनि हिसाबले पनि छ कि त्यो केवल2को लागी सक्रिय हुन लाग्दछ, र अझ बढी हिसाबले शर्लक होम्स (शर्लक एपको बारेमा सोच्नुहोस्) बारे टिभि श्रृंखलामा रुचि राख्दछ।
हामी जॉन डे मोल को एक सन्दर्भ को पनि देख्दछन, जसको मैले धेरै लेखहरुमा संकेत दिए हो कि यो गहरीफेक प्रोडक्शन को पछि ठूलो मान्छे हुन सक्छ ("कौन है डी मो?")। यो सबै को आचरण को तहत "यदि हामी यसलाई खुल्ला रूपमा देखाउँछौं र हामी यसको साथमा जान्छौं, त्यसपछि हामी निश्चित छौँ कि हामी वास्तवमा मानिसहरूलाई सबै कुरा बताउन सक्छौं"?
ट्याग: 221B, अजा, अनुप्रयोग, बेकर स्ट्रीट, गहिराइ, deepfakes, फेसबुक, विशेष, होम्स, प्रोफाइल, psyop, भेडा, शर्लाक, छुटेको छ, छुटेको छ
3 जून 2019 मा 22: 18
तलको पाठबाट आएको छ यो लेख (लिङ्कमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण पढ्नुहोस्):
मलाई थाहा छैन यदि तपाईं चलचित्र मन पराउनुहुन्छ ट्रममन शो यो देखेको छ र वास्तवमा म केही फिल्महरू, श्रृंखला र सम्भव रूपमा टिभि देख्न सिफारिस गर्दछु, किनभने यसले सम्मोहनको अधीन गर्नेछ। यद्यपि, त्यो फिल्म त्यस सम्मोहनबाट जागरणको बारेमा हो, तर केवल र केवल नायक ट्रumanको लागि (जिम क्यारेरीद्वारा खेलेको)। हाम्रो वास्तविकताको ट्रममन शो थोपा अधिक व्यापक छ र धेरै मानिसहरू यो संग काम गर्दै छन् र त्यहाँ धेरै झूटा वास्तविकता मा रहेका धेरै मानिसहरू छन्। यो वास्तविकता हो कि जनसंख्या को एक सानो प्रतिशत संग समन्वित छ र धेरै जो ट्रममन शो निर्देशक को एक भाग हो आफैलाई कुनै विचार छैन। यो किनभने घडी कार्यले धेरै रडार र भागहरू समावेश गर्दछ। किनकि मानिसहरूले सम्पूर्णमा केवल एक रडार बनाउँदछ, तिनीहरू आफैलाई देख्दैनन् कि उनी कम्पनी सूची र छलको समयका भाग हुन्। माथिल्लो तह यो जान्दछ कि कडा कोर हो र हामी यसलाई अन्तस्करणको लागी यो गर्न सक्दैनौं; अन्यथा तिनीहरूले यस प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष नगरेनन्।
सायद तपाईं यहाँ एक नयाँ पाठक हुनुहुन्छ र तपाईले यो सबै बेकार खोज्नुहुन्छ। तपाईं सोच्नु हुन्न कि तपाईं ट्रुमन शो मा सबै प्रकारका हुनुहुन्छ। तपाईले 'नकारात्मकता' पाउन सक्नुहुनेछ र तपाई नकारात्मक व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनु चाहानुहुन्छ। तपाईं मार्को बार्सोटो र तिनको सँगी कलाकारहरु जस्तै एक शो पनि सम्भवतः अद्भुत व्यावसायिक मनोरञ्जन र शुद्ध खुशी (तपाईंको स्वादको आधारमा) पनि फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं ठूलो उत्पादनमा गर्व हुन सक्छ कि नेदरल्यान्ड अझै पनि तल राख्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ। तपाईं जान्दछन् कि रोमीहरूले मानिसहरूलाई रोटी र खेल पनि दिए, तर तपाईसँग ठीक छ; तपाईं बस यो मजा लिनुहुन्छ। "हामी सबै राम्ररी सँगसँगै सँगै छौं!" तपाईले सोच्नु भएको छ कि जेलमा हाम्रो वरिपरिका रूपमा बनाइनेछ शायद बेकार छ। वास्तवमा, यो सम्भवतः धेरै मानिसहरूमा लागू हुन्छ। यो तपाइँले तल भिडियोमा हेर्ने प्रभाव हो। यसको खातिर हेर्नुहोस्। यो पनि एक मजेदार भिडियो हो, किनभने सम्मोहन अन्तर्गत मानिसहरूले सोचेका छन् कि तिनीहरू मीठा रसदार आम खाएका छन्। त्यसैले तिनीहरू शाब्दिक लेमन को एसिड स्वाद गर्दैन जसमा उनि काटते हो।
ओह तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न कि तपाईं सम्मोहन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? पहिलोमा, ट्रमनले उनीहरूलाई झूटो वास्तविकतामा राखेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् जब सम्म उनले उल्लेखनीय चीजहरू देखाउन थाले। अब तपाईं पनि यसो भन्न सक्नुहुन्छ: "म ती उल्लेखनीय चीजहरू हेर्न चाहँदैनन् र मलाई लाग्छ कि म अहिले बाँचेको छु।" त्यसो त, ट्र्युम्यान शोहरूको संरक्षक (यो राख्ने सम्पूर्ण रडार कार्यकर्ताहरू) यो हो (धेरै चतुर्थार्थ) सुनिश्चित भएको छ कि जो व्यक्तिले आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू 'साजिश विचारकहरू,' दायाँ ',' राष्ट्रवादी '' विरोधी ' वैश्वीकरण ',' विरोधी-जलवायु उपायहरू ',' जो मान्छे विश्वास छ कि पृथ्वी फ्लैट छ ', आदि। त्यसैले, तपाईं त्यस समूहसँग सम्बन्धित गर्न चाहनुहुन्न। त्यसपछि यसलाई पढ्नुहोस् यो लेख उनीहरूले यो गरे कसरी विस्तृत व्याख्याको लागि।
त्यसोभए यदि तपाईं सम्मोहन रास्टी रोस्तोसेलीको त्यो चरणमा उभिएको हुनुहुन्थ्यो र म खडा हुनेछु र चिन्ता गर्छु कि तपाईं खट्टा नींबू खानुहुन्छ र तपाईंको दाँत ईमिलेललाई असर भइरहेको छ; यदि म तपाईंलाई पहेंलो पहेंलो र बीउ को प्रमाण को रूप मा एक नींबू को रूप मा इंगित गर्नेछु, तपाईं मलाई सम्झना र मेरो मुख बंद रहना सम्झना हुनेछ। आखिर, तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं एक न्यानो रसदार माई खाईरहेको छ। त्यसैले तपाईं मलाई सुन्न चाहनुहुन्न र तपाईं समूहमा हुनुहुन्छ जुन तपाईं संग सम्मोहन अन्तर्गत हुनुहुन्छ, जसले मलाई सुन्न चाहँदैनन्। कसैले यो सुन्न चाहँदैनन् कि तिनीहरू वास्तवमा नींबू खाँदैछन्। एक साथ तपाईं मा हँसिन्छ र तपाईं मलाई डरलाग्दो छ।
तथापि, सबूत स्पष्ट छ, तर तपाईं चाहानुहुन्छ र यसलाई देख्न सक्नुहुन्न किनकि तपाईंको दिमाग जानकारी द्वारा गुजर रहेको छ। यद्यपि, नींबू यति खट्टा छ:
सरकारहरू ग्यालेफिक्स र सफ्टवेयर प्रविधिहरूमार्फत नकली समाचार, टिभी उत्पादन प्रविधिहरू लागू गर्छन् मनोवैज्ञानिक संचालन (पीओएसओपीएस) ताकि तपाईं कानून स्वीकार गर्नु हो कि कुनै नागरिक एक मनोचिकित्सक या न्याय को हस्तक्षेप को बिना सडक को बंद गर्न सक्छन् (हेर्नुहोस यो लेख en यो व्याख्या यो मा)। विद्रोहीहरूको साथ तल!
एक 5G सञ्जाल निर्माण गरिँदैछ जसले सरकारहरूलाई डिजिटल नियन्त्रण प्रणालीको अंश बनाउन सक्षम बनाउँछ, जसलाई डीएनए अनलाइन परिमार्जन गर्न सकिन्छ र मानव मस्तिष्कले अनलाइन ह्याङ्ग गर्न सक्दछ (प्रकार्य पढ्ने र लेख्ने लेखन)। यसले तिनीहरूलाई आबादीमा कुल नियन्त्रण दिन्छ। यसका लागि कानुनीकरणले नकली समाचार मनोवैज्ञानिक सञ्चालनमार्फत तयार भइरहेको छ जसले स्वीकृतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ डीएनए डाटाबेस, मानव शरीर को निपटान (अंग दान कानून)। मस्तिष्क जडान मार्फत जनतामा बेचेको छ एकै हातमा यो कृत्रिम बुद्धि (एआई) ले हामीलाई खारेज गर्नेछ र एक खतरा खडा गर्नेछ, ताकि हामी यसको साथ राम्रोसँग जोड्न सक्दछौं (एलोन मास्क) र अर्कोतर्फ नयाँ पीढी दिन चाँडो सिक्ने मौका र, उदाहरणका लागि, खेल र पोर्न उद्योगको माध्यमबाट।
सरकारहरू विश्वव्यापीकरण परियोजनामा ​​काम गरिरहेका छन् जुन विरोध वा दुर्व्यवहारको प्रयोग गर्दछ। तपाईंले रूस / चीन विरुद्ध अमेरिकाको बारेमा सोच्नु पर्छ, तर राजनीतिमा द्विवादवादको पनि। यो बाँया बनावटको दाँया वा पुराना स्थापित आदेश र "अभिनव राजनीतिक आंदोलनहरू" को उपस्थिति हो। मा यो लेख म व्याख्या कसरी गर्छु, उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय राजनीति नियन्त्रित विरोधको माध्यमले काम गर्दछ।
विश्वव्यापी धक्का ट्रागगेंडर (एलजीबीटीआई) प्रवद्र्धन को लागी सरकारहरु किनकि उनि एक ट्रांसगेंडर-ट्राफेनमैन विश्व जनसंख्या को लागी गर्दै छन्। एक जनसंख्या जसमा हिटरोज़ोजुलल जैविक स्तर एक लिङ्ग-तटस्थ मानक द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ (सबै प्रकारका मिक्स फारमहरू जसलाई LGBTI भनिन्छ) बाट सुरु हुन्छ; त्यो जनसंख्या अब प्राकृतिक प्राकृतिक रूपमा पुन: पेश गर्न सक्षम हुनेछैन र त्यसकारण नियन्त्रण पनि राज्यसँग झूट हुनेछ। लिङ्ग तटस्थ संस्करण एक धार्मिक प्रकृति (लुसिफरियन, इंद्रधनुष) पनि हो। नयाँ लूसिफरियन संसारको आदेशले 1 विश्व धर्मको लागि प्रयास गर्दछ, 1 लिङ्ग (लिंग तटस्थ र त्रासदी) र 1 विश्व सरकार।
माथिको सूची साइट्रिक एसिडको मात्र छोटो सारांश हो जुन तपाईंले उपभोग गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै बढिरहेको छ, तर यो सानो प्रभाव हो।
म तपाईलाई आफ्नो सम्मोहनबाट बाहिर आउन र रस्सी रोस्तोली चरणमा तिम्रो साथ उभिरहेको व्यक्तिलाई हल्लाउन सोध्दछु। यो संसारको मार्को बोरोटोको हो कि तिमी सुन्दर संकट र शो बाट सम्मोहन अन्तर्गत रहनु हो। गोप्य वा यसको बिना यो जानकारी, तिनीहरूले ठूलो एजेन्डामा योगदान गर्छन्।
4 जून 2019 मा 12: 48
के मैले आफ्नो फेसबुकमा मद्दतको लागि एक प्रकारको रो देख्छु?
सिबे वेगरहरूको विफलताले पनि स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेको थियो कि पड़ोसमा बस्ने व्यक्तिले कहिल्यै दुई-मीटर-उच्च सिएबलाई कहिल्यै देखिन सकेन, यो असम्भव छ, त्यसैले हानिले 100% घण्टाको लागि घटेको छ।
यो वास्तवमा लगभग निश्चित रूपमा अन्य प्रकारका हानि हुन सक्छ
ती मानिसहरू जसले मुख्य स्ट्रीम मिडिया र व्यक्तिहरूलाई सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरूलाई यो प्रकारको दोषी ठहराउन पनि सक्छ। नगद प्रवाह वा अन्य फाइदा, मलाई मद्दतको लागि तपाईंको रोकामा विश्वास छ, श्री विर्जल्याण्ड
यस्तो कार्यहरूमा भाग लिने बिरामी मानिसहरू बेपत्ता छन् र बुझ्दैनन् कि ती व्यक्तिहरूले उनीहरूको वातावरण र पारिवारिक सदस्यहरू कसरी हेर्न सक्छन्। (व्यवहार धम्की भन्दा बढी)
4 जून 2019 मा 12: 59
"हो, तर सिबे वेगरहरू फेला परेका छन् ताकि कोही मनोचिकित्सक थिएन" मानिसहरू त्यसपछि भन्नेछन्
उत्तर: होइन, मिडिया भन्नुहुन्छ। के हो कि शायद "स्वच्छ" को लागि एक आसान तरीका एक मनोचिकित्सक कि टोकरी को माध्यम ले गिरएको थियो?
हो, सम्भवतः, किनभने उनीहरूले मेरो फोन सुन्नुभयो (मलाई उचित लाग्छ) उनीहरूलाई थाहा थियो कि मेरो थप चित्रहरू छन् (जस्तै पबमा कुराकानी भएको कुराकानीको रेकर्डिङ जहाँ हाल अन्तिम थियो)।
4 जून 2019 मा 13: 06
ओह हां ... मृत फेला पर्यो, तर अत्यावश्यक कडा कारण थियो कि निर्धारण गर्न। अथवा त्यो केवल अवस्थित छैन? र के यो कथाले मोर्चामा खसेको छ?
3 जून 2019 मा 22: 34
फुलर एक मात्र हो जसले टिप्पणी पोस्ट गरेको छ? पढ्नुहोस
धेरै दुखाइ कथा
4 जून 2019 मा 17: 28
तपाईं यस अजा भेडाको फेसबुक पेज कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
मैले उसलाई भेट्टाउन सकेन, मैले पहिले नै लिङ्क टाइप गरें।
यदि यो साँचो हो भने यो हास्यास्पद छ हाँ।
4 जून 2019 मा 17: 43
4 जून 2019 मा 18: 29
एक मनोचिकित्सक हानिकारक फेला पार्नुहोस् ???
4 जून 2019 मा 21: 01
मेरा मतलब यो यो बरु विशेष छ कि यो लाग्छ कि उनी जान्थ्यो कि उनी जान्थे कि शेर्लक होम्ससँग लिङ्क फेसबुक प्रोफाइलमा लिङ्कहरू बनाउँछन्, जस्तै कि तिनीहरूले यो गर्दै थिए।
निस्सन्देह वास्तवमा हँसिलो छैन, बरु रुन्छ।
तर मैले सोचेँ कि स्पष्ट थियो।
5 जून 2019 मा 08: 59
ठीक छ, पहिलो मा मेरो छाप थियो कि तपाईं मनोचिकित्सक लाई कम गर्दै थिए।
यी मुद्दाहरूमा मनोविज्ञानहरू वास्तवमा ग्ल्याडिया कार्यहरू अद्यावधिक गरिन्छन्। तिनीहरू धेरै सूक्ष्म, चौंरी, भ्रामक छन्।
खैर, लिपिका साथीहरूले यो कसरी थाहा पाउँछन्। उनीहरूले उनीहरूको इच्छा अनुसार सबै कुरा नियन्त्रणमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्।
4 जून 2019 मा 22: 06
कटकजीको नगर पालिका (घर र अन्जाको जन्मस्थान) मा कुनै बेक्स्ट्रिटमा छैन। स्पष्ट रूपमा एक मनोविज्ञान।
5 जून 2019 मा 04: 55
भेडा नाम अझै पनि उल्लेख गरेको छैन। प्रायजसो भेडाहरूले आफैलाई भगाई र भेडामा (मीडिया) द्वारा डराउने अनुमति दिन्छ ताकि यसले हाम्रो देशका नेताहरूले हाम्रो लागि उत्तम अर्थ हो।
11 जून 2019 मा 09: 36
शंकास्पद छ कि तपाई साँच्चै सही हुनुहुन्छ, टिभि वेस्टले शायद फेस मोफिंग प्रयोग गरेको छ, greenscreen संग गहिराइमा संयोजन,
अन्जा स्कापको जीवनको प्रशंसा गर्ने प्रमाण अब सम्म विशेष गरी एकजना व्यक्तिले गरेको छ जसलाई वेगा एक्सएनमक्समा अन्जाको अपार्टमेन्टमा बस्न पाउनेछ। Katwijk मा, टीवी पश्चिम टाइमलाइन फिलिममा देखाइएको छ, लिङ्कमा टिभी वेस्ट फिलिम हेर्नुहोस्
यद्यपि, एकपटक हामी मानिसको अनुहारमा जुम गरौं, हामी पहिले नै अजीब भक्तिहरु देख्न सक्छौं।
AVG कानुनको कारणले, यो साइटमा फोटो राख्न सम्भव छैन जुन यसमा कुन विचलन समावेश छ भनेर संकेत गर्न सकिन्छ। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो काम गरेका छन्, गम्भीर गल्तीहरू बनाइयो, तर तपाईले साँच्चै अनुहारमा जुम गर्नु पर्छ, कसैलाई त्यो समय लाग्छ तर कल्पना गर्दछ यदि तपाईं गर्नुहुन्छ
दस निष्कर्षहरू तल: मिनेट 01 मिनेट -25 सेकेन्ड। 00 देखि 01 मिनेट-51 सेक। 18 त्यहाँ धेरै छन् तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
1- मानिसको कानहरू अनुहार अचम्म लागेका छन्
2- कानको आकार बारे कुरा गर्न सकिन्छ तर यसलाई अन-प्राकृतिक भनिन्छ
3- कपालको कलर, कालो खैरो देखि खैरो र गोरी रेडको टाउको? (यो सम्भव छ, तर अझै पनि?)
4- मिनेट 01-28.2 जबड़े लाइनमा विशाल धब्बा? यही कारणले मानिसले बायाँको लागि आफ्नो टाउको घुमाउँछ, हो जुन सम्भव छ, तर धब्बा (धब्बा चित्र) पनि त्यहाँ छ जब हेड अब राखिएको छ।
5- विशाल धब्बा जबरन र गले वरिपरि छ तर कालो जाँच गरिएको जैकेटले देखाउँछ
रेजर-तीव्र छवि, तपाईं कपडा पनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ।
6- 1-37.07 मा दोस्रो 1-37.19 बाट जानुहोस्, मुख खोल्दा रोबोट जस्तो देखिन्छ
निचो जबल चल्दछ तर अनुहार बाँकी रहन्छ, जो धेरै अन-प्राकृतिक हुन्छ।
7- 1-45.17 मिनेटमा पूर्ण रूपमा खुल्ला हुन्छ, यसैले धेरै उज्यालो पलकहरूमा आउँथ्यो तर राम्रो र अँध्यारो चोटी फेरि छ, गल्ती
8-01-46.19t / M 01-47.12 यो हास्यास्पद छ, सबै थोरै पक्षमा झिल्लीहरू देखाउँछन् र उनीहरूको बायाँ आँखामा नदेख्ने, न्यानो आनुपातिक रूपमा धेरै ठूलो छ, झन् झन्
धेरै अतिरक्त हुनुहोस्, तीब्रहरू जुन दोस्रोको लागि हेर्न सकिदैन। गालहरूमा एकदम कम र पछि छ तर मांसपेशिहरु त्यहाँ छैनन्, आँखाहरू अब देखिने देखिने आदि आदि ... आदि ...
9 - मुख को कोने मा माथि कष्टप्रद भूरे रंग को स्थान, उनलाई हरेक र फेरि जाना
उसको मुखको तीव्रता र गहराई देखेर चालियो, यो धेरै अन-प्राकृतिक देखिन्छ।
10- सम्म 01-38.07 सम्म र 01-42.22 समावेश गरीएको जैकेट को हुडमा आँखा राख्नुहोस् यसको निरन्तर घिमिरेको सम्बन्धमा, सीएनएन टोपी (हुड) सँगसँगै हिड्छ र फेरि सबै ठाँउ स्थिर हुन्छ। क्यामेरा अझै कष्टप्रद लाग्दछ, बरु अस्थायी क्यामेरा मा।
11- केवल राम्रो दर्शकको लागि: तपाइँ बायाँ पर्खाल र अरू पृष्ठभूमि पृष्ठभूमिको अग्रगामीमा राख्नुहुने छैन, किनकी त्यो क्यामेरा लगातार कष्टप्रद हुन्छ।
र अन्य विकल्पहरू हेर्नुहोस्
12 जून 2019 मा 13: 06
AVG विधान निश्चित रूप देखि नागरिकको लागि बनाइएको छैन, जुन अहिले स्पष्ट हुन सक्छ।
यो साँच्चिकै भन्नको लागि पागल छ कि मीडिया (= कताई पावर) व्यक्तिले जनसमर्थनमा उड्न सक्दछ, तर मानिसहरूले आफ्नो सँगी मानिसलाई आफ्नो विधिहरू प्रयोग गर्न सक्दैनन्, मान्छेहरूले साबित गर्न सक्छन्। नि: शुल्क शब्द को कुल घटाइरहेछ र त्यसपछि हामी एक मुक्त लोकतांत्रिक देशमा बस्छौं भनेर विश्वास र विश्वास राख्नुहोस्। उनीहरूको पद्धतिको साथ उनीहरूले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान गर्छन् जुन हामी अत्याचारमा बस्छौं, तर हामी प्रमाणित गर्न सक्दैनौं किनकि त्यो सजाय हो
13 जून 2019 मा 15: 55
म सहमत छु! 'सोसायटी कर्मचारीहरू' फिल्मीकरणको निन्दा कसरी छिट्टै गोपनीयताको सम्बन्धमा लिङ्क कसरी हेर्नुहोस्। राज्य धेरै चालाक, Machiavellian तर्क प्रयोग गर्दछ। तपाईले केवल पूरा 180 ° चलाउनुहुन्छ
"चलचित्र बनाउने र सोशल मिडियामा साझेदारी गरेर सबथेजको सहयोग गर्ने: कडा सजाय!
फिल्म बनाउन तपाईं पीडितहरूको गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ। "सोशल मिडियामा यस्तो सामग्री प्रकाशित गरिदिनु पर्छ। किनकि गोपनीयता कानूनको बारेमा, यस भिडियोले परिवार र साथीहरूलाई के गर्दैन भनेर उल्लेख गर्दैन। "
यस्तो एक विरूवा निश्चित रूपले आफ्नै बाटो जान सक्छ र एभी प्रमाणपत्र प्रदान नगरेको बिना कसैले कसैलाई मदत गर्न सक्छ। सेवक cq। मनोकोषलाई हरेक पटक सुरक्षित राख्न आवश्यक छ, यस्तो अभावको लागि उत्साह वेङ छ र कारोबार उच्च छ। AI-controlled UAV / रोबोटहरू सक्रिय छन् भन्दा पहिले, यो अवधि प्रयोग कानूनी रूपमा सबै केहि बन्द गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ, निश्चित रूपमा राज्यको अन्तमा must
« थियज एच। पीएसओपी प्रोफेशनल सेक्रेटरीलाई कमजोर पार्नु भएको छ र पहिले नै हासिल भएको छ
जोस बी (निकई वर्स्टप्पेन) अब PsyOp एक वकीललाई क्लाइन्ट स्टेटमेन्टहरूको माग गर्न पनि प्रयोग गरियो? »
कुल भ्रमण: 16.027.831